Ingumpetha ekongeni eyakwa-BMW | Isolezwe
Ingumpetha ekongeni eyakwa-BMW
Isolezwe / 2 August 2012, 1:05pm /
UMA uhamba nge BMW 530d kumele wazi ukuthi uhamba ngemoto eyonga kakhulu ukwedlula ezinye kuphethiloli.
Le moto iyona edle umhlanganiso emncintiswaneni walo nyaka i-2012 Total Economy Run ebibanjelwe eWhite River eMpumalanga ngempelasonto esiphuma kuyo.
Enye imoto yakwa BMW ezibonakalisile kulo mncintiswano ngokonga kube i-BMW 320d enezinyanga eziyisishagalolunye kuphela yethuliwe emakethe yezimoto.
Kule minyaka engu 36 edlule iTotal Economy Run kuselokhu kuyiyo ethathwa njengomncintiswano ongachemile futhi othembekile lapho kukalwa khona izinga le moto ekusebenziseni uphethiloli eNingizimu Afrika.
I- BMW 530d ibincintisana nezinye izimoto ezintathu esigabeni sayo kodwa yona ikhombise ukonga ngoba ngebanga lika 100km isebenzise kuphela amalitha angu 6,6 kadizili, kwase kuthi iBMW 120d nayo ebincintisana nezinye izinhlobo ezintathu zezimoto yona yakwazi ukusebenzisa amalitha angu 5,2 kadizili ngebanga lika 100km.
Le BMW uzokhumbula ukuthi iyona ephuma nenjini eyi straight-six turbodiesels, kanti ngonyaka odlule idle umhlanganiso iqokwa njengemoto yonyaka kuleli yi Wesbank South African Guild of Motoring Journalists (SAGMJ) Car of the Year.
Injini engu 3.0-litre ye-BMW 530d ikhiqiza amandla afinyelela ku 180 kW kanye ne-torque engu 540 Nm.
Akubuzwa ukuthi amandla ebhubesi lawa ongeke nangengozi wayithatha le moto wayinika umuntu osafunda ukushayela, ngoba kuba ukushaya ukhiye ufake igiya eliya phambili uyizwe ukuthi ifuna ukugxuma.
Ijubane layo eliphezulu ligcina ku 250 km/h, kanti iphuma no-gearbox ongu 8-speed ongumshini ozishintshayo.
Imoto yesibili yakwa-BMW edle umhlanganiso inenjini engu 2.0-litre isebenzisa udizili kanye namandla angu 135 kW ne-torque efinyelela ku- 380Nm. Ijubane eliphezulu kule moto lifika ku-228 km/h.